I-anemia - Ezinye iimpawu ekufuneka uziqaphele | Bezzia
USusana godoy | 14/05/2022 14:00 | Izifo
Kuyinyani ukuba xa sicinga ngeanemia siyinxulumanisa nokudinwa okanye ukudinwa. Kodwa ngokuqinisekileyo uyazi ukuba kukho olunye uthotho lweempawu ekufuneka sizithathele ingqalelo. Ke, akukho nto ifana nokuzidwelisa, kuba mhlawumbi azixhaphakanga kodwa nangona kunjalo, kufuneka sizithathele ingqalelo ngaphambi kokuba soyike ukucinga ngezinye izizathu.
I-anemia yenye yezona zinto zixhaphakileyo zegazi, apho iiseli ezibomvu zegazi azanelanga ukuthwala i-oxygen. Ngenxa yoko, ukudinwa yenye yeempawu zokuqala esizithathela ingqalelo. Kodwa kukho ezininzi kwaye ngokuqinisekileyo nazo zibalulekile. Fumana zonke ezo kufuneka uzithathele ingqalelo!
1 Ulusu lugqabhukile kunesiqhelo
2 Ukuthanda umkhenkce kunokuba luphawu lwe-anemia
3 Imilenze yesifo esinganyangekiyo
4 Ukudideka okanye ukukhanya
5 Izandla neenyawo ezibandayo zinokuba luphawu lwe-anemia
Ulusu lugqabhukile kunesiqhelo
Kucacile ukuba xa sidiniwe okanye singafuni kwenza nto, oku kunokubonakala nasebusweni bethu. Ngoko ke, xa kukho into engasebenzi ngendlela echanekileyo ngokupheleleyo emzimbeni wethu, iya kuphuma. Yiyo loo nto, kule meko, enye yeempawu ezinokusenza sikrokre ukuba i-anemia lulusu olumhlophe kunesiqhelo. Ngaphezu koko, iya kubonakala malunga namehlo, ekubeni ulusu lunobucayi ngakumbi apho kwaye iya kuyeka ukuba nombala wamaxesha onke. Ngokuyijonga nje uya kuqonda ukuba kukho into eyenzekayo. Kakade ke, akukho nto efana novavanyo lwegazi lokufumanisa.
Ukuthanda umkhenkce kunokuba luphawu lwe-anemia
Yiza ucinge ngayo, iminqweno ayisoloko imiselwe izinto eziswiti okanye ezinetyuwa. Ziyakwazi ukuba zihluke kakhulu, kuba kule meko kubonakala ngathi lo mgaqo ulandelwa. Kuyinyaniso ukuba akusiyo impawu ehlala isenzeka, kodwa kufuneka ithathelwe ingqalelo. Ukuba nangawuphi na umzuzu unqwenela ukuphakama efrijini kodwa uye kwisikhenkcezisi, ikwangumqondiso wokuba kukho into eyenzekayo emzimbeni wakho. Isizathu asaziwa kakuhle, kodwa sinxulumene ne-anemia. Ngokufanayo, kukwathiwa ukunqwenela ukutya ukungcola yenye into enokuvela. Ingakholeleki kodwa yinyani!
Imilenze yesifo esinganyangekiyo
Kuyinyani ukuba ukuba sicinga nge-syndrome ngokwayo, akukho mpendulo ecacileyo malunga nokuba kutheni ibonakala. Kukholelwa ukuba kungenxa yokuba i-dopamine ayilingani kwaye ngoko imisipha ayikwazi ukulawulwa. Liyinyaniso elokuba le yingxaki echaphazela abantu abaninzi. Kodwa xa kunjalo kukwahluke kancinane. Kuba ukuba awunayo le ngxaki, kodwa ewe ibonakala kwaye iphawule imizwa engaqhelekanga emilenzeni, kunye nomnqweno wokuyihambisa, ngoko sinokukhankanya ukuba i-anemia ifikile ebomini bakho. Oku kungenxa yokuba uswele intsimbi. Kodwa kwakhona siyagxininisa ukuba akukho nto ifana nokuya kugqirha wakho ukuze ahlalutye.
Ukudideka okanye ukukhanya
Ewe yimvakalelo engathandekiyo, kodwa ngaphambi kokuba sicinge ngezinye izifo, kufuneka sitsho ukuba inokuba yi-anemia. Ikwathathwe kwi ukungabikho kweevithamini ezifana ne-B12 okanye i-vitamin C kunye ne-folic acid. Eyokuqala esiyibize ngegama iyimfuneko ukuze ube nenkqubo yemithambo-luvo esempilweni kakhulu. Ngoko ukuba asinalo olu hlobo lweevithamini, ngoko siya kuba nekhono elincitshisiweyo lokugxila kunye nokukhumbula.
Izandla neenyawo ezibandayo zinokuba luphawu lwe-anemia
Olunye uphawu olunokuthi lubekho soloko unezandla neenyawo ezibandayo. Ewe, ayisayi kuhlala isikhokelela ekubeni sithethe nge-anemia, kodwa kufuneka siyithathele ingqalelo. Njengoko ziya kuba mbalwa iiseli ezibomvu zegazi, ezi ziya kuba yimfuneko ukuze ziphumeze imisebenzi ebalulekileyo emzimbeni yaye ziya kuzityeshela ezinye ezingagqalwa njengezinjalo. Ngenxa yoko, abayi kufikelela ezandleni okanye ezinyaweni, eziya kuhlala zibanda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Izifo » I-anemia: ezinye iimpawu omele uziqaphele